Wajiga labaad ee shirka wada-tashiga ka qeyb qaadashada isbeddelka Cimillada oo ka furmay Muqdisho+Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wajiga labaad ee shirka wada-tashiga ka qeyb qaadashada isbeddelka Cimillada oo ka...
Wajiga labaad ee shirka wada-tashiga ka qeyb qaadashada isbeddelka Cimillada oo ka furmay Muqdisho+Sawirro.
Wajiaga labaad ee shirka wadatashiga ka qeyb-qaadashada isbeddelka cimillada ee heer Qaran ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Shirkan oo uu soo qaban qaabiyay guddiga isbeddelka cimilada Xafiiska Ra’isulwasaaraha Dalka ayaa waxaa ka qeyb-galaya wasaaraddaha bay’adda ee Dowlad Goboleedyada Dalka qaar ka mid ah iyo hay’addaha Dowladda dhexe isagoo socon doono muddo labo maalmood ah.
Sida qorshahu yahay waxaa la uruurinayaa dhammaan xogaha isbedelka cimilada ee heer qaran si loo horgeeyo sanadkaan dhamaadkiisa hay’adda qaramada midoobay u qabilsan isbedelka cimilada ee dunida Soomaaliyane ay ka tirsan sida uu sheegay agaasimaha guud ee agaasinka isbedelka cilimadda Xafiiska Ra’isulwasaaraha dalka Mudane, Axmed Yuusuf Axmed.
Sidoo kale waxyaabaha lagu gorfeynayo waxaa ka mid abaaraha iyo fataahaddaha soo laabatay ,ka faa’iideysiga Xoolaha, beeraha, biyaha wax soo saarka shidaalka, wasaqowga hada iyo guud ahaan Cimilada dalka waxaana xubaha matalayay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay soo dhaweeyay muhiimada shirkaan uu leeyahay.
Wajiga kuwaad shirkaan isbedelka cimilada waxa uu ka dhacay bilaawga sanadkaan magaalada Garoowe ee xarunta Punland hase ahaatee xafiiska isbedelka cimilada waxa uu sheegay in illaa iyo sedex shirkale laga qaban doonaan dhammaan waxyaabaha kasoo baxo la geyndoono shirka guud ee Qm ee la filayo inuu dhaco bisha 12 Decembar ee 2020.
Previous articleGuddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo kormeeray isbitaalka deegaanka Gawaan ee gobolka Mudug+SAWIRRO.
Next articleSii hayaha Ra’iisul Wasaaraha XFS oo xariga ka jaray xafiiska hubinta tayada qalabka dhismaha+Sawirro.